Fluomez မြင့်မားတဲ့အပူချိန်အပ်ဝမ်းနည်း China Manufacturer
အက်ဆစ်အယ်လကာလီတစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ်ခံစားခဲ့,PPS အမြင့်အပူချိန်ကိုခံနိုင်ရည် Dedusting Bag,PPS အက်ဆစ်အယ်လကာလီကိုခံနိုင်ရည် Dedusting Bag
Botou Hengrui Environmental Protection Equipment Co. Ltd. [Hebei,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား: Manufacturer အဓိကစျေးကွက်များ: Worldwide ထုတ်ကုန်: 61% - 70% ဖေါ်ပြချက်: အက်ဆစ်အယ်လကာလီတစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ်ခံစားခဲ့,PPS အမြင့်အပူချိန်ကိုခံနိုင်ရည် Dedusting Bag,PPS အက်ဆစ်အယ်လကာလီကိုခံနိုင်ရည် Dedusting Bag
Home > ထုတ်ကုန်များ > ဖုန်မှုန့်ကောက်ခံရေး Fittings > အိတ်စုဆောင်းခြင်းမြေမှုန့် > Fluomez မြင့်မားတဲ့အပူချိန်အပ်ဝမ်းနည်း
 Fluomez မြင့်မားတဲ့အပူချိန်အပ်ဝမ်းနည်း
အဆိုပါ filter ကိုအိတ်လုပ်ပြီး install အခါနန်းကြိုးအမျှင်လေးများကိုပျက်စီးစေခြင်းနှင့်စစ်ထုတ်အိတ်အချိန်တိုအတွင်း perforated ခံရဖို့ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါမသကဲ့သို့ 1. သည်, ခက်အရာဝတ္ထုနှင့်အတူ filter ကိုအိတ်ဆွဲထားကြပါဘူး။
2. ကိတ်မုန့်၏အထူသင့်လျော်သောအခါအဆိုပါကိတ်မုန့်ရပ်တန့်ထားရမည်ကို၎င်း, filter ကိုအိတ်၏ဝန်ဆောင်မှုဘဝတာရှညျမညျနိုင်အောင်အလုပ်, အကိတ်မုန့်ချပြီးနောက်ထွက်သယ်ဆောင်ပါလိမ့်မည်။
အဆိုပါ filter ကိုအိတ်ပြောင်းလဲနေတဲ့သည့်အခါ 3. ကြောင့်တိုက်ရိုက်ခက်တ္ထုနှင့်အတူ filter ကိုအိတ် buckle နှင့်အရန်ခါးပတ်ကိုဆင်းဆွဲထုတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
4. filter ကိုကိတ်မုန့်ချတဲ့အခါမှာ filter ကိုအိတ်ပျက်စီးမှုကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့သကဲ့သို့, ကိတ်မုန့်ချ tool ကို, အဖြစ်ဝေးနိုင်သမျှအတိုင်း filter ကိုအထည်နှင့်အတူအပြိုင်ထားသင့်ပါတယ်။
filter ကိုအထည်လုပ်ပြီး install အခါပန်းကန်နှင့်ဘောင်ကြောင့် filter ကိုအထည်များလျှော့စျေးမှ compressed သောအခါ filter ကိုအထည်မပျက်စီးစေရန်သကဲ့သို့ 1. , frame ရဲ့အထက်ပိုင်းအပေါ် filter ကိုအထည်ပန်းခင်းလမ်းနှင့် fixed ကြောင်းအာမခံပါသည်။
(2) စစ်ထုတ်ကိတ်မုန့်အထည် filter မှလိုက်နာစောင့်ထိန်းသောအချိန်ရှည်လျားလွန်းမဖြစ်သင့်ပါတယ်။ အချိန်ကိုရှည်လွန်းနေသည်ဆိုပါက filter ကိုအထည်များပုံပျက်သောနှင့်တွဲဖြစ်ပေါ်စေပါလိမ့်မယ်။
3. ကိတ်မုန့်ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့သည်သောအခါ, ကိတ်မုန့်ကတော့ filter ကိုအထည်၏ညှနျကွားတလျှောက် shoveled ရပါမည်။
ခါးပတ် filter ကို
(1) (ပူးတွဲ၏အရှည်အပါအဝင်) လိုအပ်သော filter ကိုအထည်၏အရှည်ကိုမှန်ကန်စွာတိုင်းတာရပါမည်။
စစ်ဆင်ရေးကာလအတွင်း filter ကိုအထည်သွေဖည်တားဆီးသကဲ့သို့ (2) ချုပ်ခြင်း, ဖောက်စွန်းခေသို့မဟုတ်အပြိုင်ဖြစ်ကြောင်းသေချာသင့်ပါတယ်။
အဆိုပါ filter ကိုအထည် interface ကိုပိတ်ဆို့ခြင်းနှင့် filter ကိုအထည်မထိခိုက်စေပါသို့မဟုတ် filter ကိုအထည် obstructing ထံမှခြစ်တားဆီးဖို့မသကဲ့သို့ 3. အဆိုပါ interface ကိုစစ်ဆင်ရေး၏ညှနျကွားဖို့အာရုံစိုက်သင့်ပါတယ်။
ဒေါင်လိုက် disc ကိုစက် (ဒေါင်လိုက် disc ကိုစက်)
(1) ကိုစစ်ထုတ်အထည်များလွန်းထူမဖြစ်သင့်ပါတယ်။ အဆိုပါ filter ကိုအိတ် installed အခါလည်းထူအပ်ချုပ်ဖို့အထောက်အကူမဟုတ်ပါဘူး။
2. ရွေးချယ်ထား filter ကိုအထည်များ၏မျက်နှာပြင်ထုတ်လုပ်ရေးထိရောက်မှုကိုထိခိုက်ပါလိမ့်မယ်အရာ, filter ကိုကိတ်မုန့်၏ဖွဲ့စည်းခြင်းဘို့သိပ်ချောချောမွေ့မွေ့နှင့်လည်းချောမွေ့မဖြစ်သင့်ပါတယ်။
အလုပ်လုပ်အမျိုးအစားစက် (ဒေါင်လိုက်ခါးပတ် filter ကို)
အဆိုပါဖောက်ချည်စွန်းခေသို့မဟုတ်အပြိုင်နေကြသည်, ထို filter ကိုအထည်များ၏သွေဖည်ရှောင်ရှားသင့်ကြောင်းသေချာစေရန် 2. ။
ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များစာရင်း: အက်ဆစ်အယ်လကာလီတစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ်ခံစားခဲ့ , PPS အမြင့်အပူချိန်ကိုခံနိုင်ရည် Dedusting Bag , PPS အက်ဆစ်အယ်လကာလီကိုခံနိုင်ရည် Dedusting Bag , စက်မှုတစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ်အိတ်ခံစားခဲ့ , Glass ကို Fiber တစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ်ဖုန် Bag ခံစားခဲ့ , တစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ် coated PTFE Dedusting Bag ခံစားခဲ့ , တစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ် Filter ကိုအိတ်ခံစားခဲ့ , Glass ကို Fiber တစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ် Filter ကိုပိတ်စခံစားခဲ့